ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အုပ်စုစွဲမထားဖို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာကြား
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် အရွေးချယ်ခံမယ့် အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အုပ်စုစွဲတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် အလုပ်လုပ်ကြဖို့နဲ့ မဲစာရင်းတွေမှာ အမှားများနေတာကို အမြန်ဆုံးပြုစုဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်က နေပြည်တော် တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မ်ိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၇ ဦးနဲ့ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တို့ ရွှေဂုံတိုင် အန်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်မှာ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တာပါ။
“ကျွန်မတို့က ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လို့ကို ဘယ်လိုပဲ ကွဲခြားမှု ရှိပါစေ ရှိပါစေ၊ နောက်ဆုံးတော့ အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မူပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ အဓိက ကိုင်စွဲထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်မို့လို့ ဘယ်သူ့မို့လို့ ငါတို့ကတော့ သိပ်ပြီးလုပ်မပေးချင်ဘူး၊ ဘယ်ဝါမို့လို့ ငါတို့ကတော့ ပိုပြီးတော့ လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးထားလို့ရှိရင် ဒါကျွန်မတို့ ရေရှည်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့် စိတ်ဓာတ်မျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ ဒီလိုပဲ ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနှစ် ၂၀ ကျော် ရပ်တည်လာတာဟာ ပြည်သူတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အနေနဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားပါတယ်။
တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေး တာဝန်ခံတွေကလည်း မဲဆန္ဒနယ်မြေ အသီးသီးက မဲစာရင်း အမှားတွေအကြောင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မသမာတဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အမည်စာရင်းတွေကို တိတိကျကျ ပြန်လည်စိစစ်ရေးအတွက် မတ်လ ၂၁ ရက်အထိ ပြင်ဆင်ခွင့်ရက် တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှာ ဒေသခံကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်ပေးဖို့ တောင်းဆို
That's really really TRUE and really really IMPORTANT. Pls God bless Myanmar.
Mar 09, 2012 12:47 AM